politics – pabiak
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း စာတမ်း http://pabiakttaungywa.blogspot.com/2016/04/blog-post_26.html
Format StatusPosted on April 27, 2016 Categories politicsLeaveacomment on
ဘိလပ်မြေ အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း” http://pabiakttaungywa.blogspot.com/2016/04/blog-post_21.html
Format StatusPosted on April 21, 2016 Categories politicsLeaveacomment on
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ” (The7Self Sabotages And How To Overcome Them)
(The7Self Sabotages And How To Overcome Them)
#Naing Win Aung-Coach
Format StatusPosted on April 13, 2016 Categories politicsLeaveacomment on “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ” (The7Self Sabotages And How To Overcome Them)
Oxford ကျောင်းသူ ဘဝ အပျိုဖျန်းမလေး မစုကြည် ဘဝ အား ပထမဆုံး သိမ်းပိုက်ခဲ့သူမှာ တဲရစ် အိုစမာ ဟိုင်ဒါ ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ဖျောက်ဖျက်မရသည့် သမိုင်းကြောင်းအား Wikipedia တွင် ယခင်က ဖော်ပြထားသော်လည်း ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သမိုင်းမှန်ကို မဖော်ပြဝံ့သဖြင့် ဖျက်ခဲ့ကြသည်
The tribune (http://adf.ly/1ZDgnr ဤlink တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်) ၏ဖော်ပြချက်မှာ –
She studied in the Convent of Jesus and Mary School, New Delhi and graduated from Lady Shri Ram College in New Delhi withadegree in politics in 1964. Suu Kyi continued her education at St Hugh’s College, Oxford, obtainingaB.A. degree in Philosophy, Politics and Economics in 1969.
According toaclassmate, Suu Kyi fell in love with Tariq Hyder,aPakistani student, during her second year in Oxford. Their relationship was not well received by her circle of friends and it soon ended .
As one of Burma’s most marriageable young women, beautiful and withafamous name, if not at all rich, there was expectation on these return visits thatasuitable young Burmese man could be found for her. We know ofacouple of these attempted matchmaking efforts, which came to nothing. Suu was turning out to be her own person, and not only in the matter of her looks. She fell in love for the first time at Oxford, withaPakistani student called Tariq Hyder, who went on to becomeasenior Pakistani diplomat, recently retired. Some Indian friends of Suu’s disliked him and disapproved of their going out together. Whether or not he was, as one of them put it,a‘sleaze-ball,’ there was no doubt that it would have beenavery challenging match, in both Burma and Pakistan. In the end he lost interest and turned her down, but the relationship, or at least her hopes for it, outlasted her university career.
Mr Hyder, who in his retirement isafrequent commentator in the Pakistani press, refused to talk to me for the book. It’s hard to see how the relationship could ever have flourished, given the cultural and religious differences of their respective countries. But then Suu wasawoman in love, with all the tenderness and optimism of youth. What is interesting to me about this episode is the proof it gives of her willpower and her independence of mind. Holding out for Mr Hyder alienated her Indian friends at Oxford and would have infuriated her mother, but Suu went her own way.
The man she eventually did marry, Michael Aris, was barely more satisfactory for her mother. Inaletter to Michael’s twin brother Anthony before the marriage, she mentions her family’s failure to give their blessing to it. But she gives every indication of not minding much. Quote: ‘I’m sure my mother and brother will get over their initial disappointment,’ she wrote, ‘at what they probably consider my usual waywardness.’ That’saphrase that struck me – ‘my usual waywardness’ – because waywardness is notaconcept we associate with Aung San Suu Kyi. And yet if we consider her record at Oxford and beyond we can see why it is applicable and why she would have used it light-heartedly about herself. While at Oxford she twice tried to change her degree from PPE, once to English and once, curiously, to Forestry, both times without success. She graduated withamiserable third, not because she was not intelligent, but because as was clear from her requests to change subject, the course did not really engage her.
ငယ်ရွယ်၊ လှပပြီး ကျော်ကြားတဲ့နာမည်တစ်ခုပိုင်ရှင် သူမအတွက် သင့်တော်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသား တစ်ယောက် ကို သူမရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပြန်ခရီးတွေမှာ တွေ့လောက်ကောင်းပါရဲ့လို့ မျှော်လင့်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော် တို့ မျှော်လင့်ခဲ့သလို မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ စုဟာ သူမစိတ်ထင်ရာကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ခဲ့ တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှာ မကြာသေးခင်က အငြိမ်းစား ယူသွား တဲ့ Tariq Hyder လို့ခေါ်တဲ့ ပါကစ္စတန်သားတစ်ဦးနဲ့ ပထမဆုံး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ စုရဲ့ အချို့ အိန္ဒိယ သူငယ်ချင်းတွေ ဟာ သူနဲ့ချစ်ကြိုက်တာကို မကြိုက်ကြသလို သူနဲ့အပြင်ကို လျှောက်သွားတာကိုလည်း ခွင့် မပြုခဲ့ကြ ပါဘူး။
သူတို့ ဘယ်လိုပဲ သဘောတူတူ မတူတူ ဒီကိစ္စဟာတော့ မြန်မာနဲ့ ပါကစ္စတန် တို့အတွက် အင်မတန် ရင် ဆိုင် ရ ခက်ခဲ့မယ့် အခြေအနေ တစ်ခုဖြစ်သလို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက်လည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတာပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူဟာ သူမ အပေါ်မှာ စိတ်မ၀င်စားတော့သလို သူမကို လည်း ရှောင်ခွာခဲ့ ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူမ တက္ကသိုလ် တက်စဉ် တစ်လျှောက်တော့ သူတို့ ချစ်ခရီး လမ်း တည်တံ့ခဲ့ ပါသေးတယ်။
ပါကစ္စတန်သတင်းစာရဲ့ frequent commentator အဖြစ်က အနားယူခဲ့တဲ့ Mr Hyder ဟာ ဒီအကြော င်းေ တွ အတွက် ဖြေပေးဖို့ကိုတော့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံမတူတာ၊ ယဉ်ကျေးမှု မတူတာ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာ သာတွေ မတူတာတွေနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုဆက်လက်တည်မြဲနေမလဲဆိုတာ သိဖို့ ခက်ခဲ လွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စုဟာ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လူငယ်ဆန်တဲ့ အမြင်တွေ၊ ကြင်နာစိတ်တွေနဲ့ အချစ် စိတ်တွေ ၀င်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒီအပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ဝင်စားမိတာက သူမရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ် အတွေးကိုပါပဲ။ အောက်စဖို့ဒ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေက Mr Hyder နဲ့ပတ်သက်လို့ ရှောင်ဖယ်ကြတဲ့အပြင် မိခင်ဖြစ် သူရဲ့ ဒေါသတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး သူမဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ သူမတို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပုံကိုတော့ ၀ီကီပီဒီယာ အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း မှာ ဒီလို ရေးထားပါတယ်။ Suu Kyi fell in love with Tariq Hyder,aPakistani student, during her second year in Oxford. Their relationship was not well received by her circle of friends and it soon ended. အချို့သတင်းများမှာတော့ Mrs Aris Aung San Suu Kyi fell in love withaPakistani, but the relationship that ended in tears ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပါကစ္စတန် သား အိုစမာ ဟိုင်ဒါ တို့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့စဉ်က ဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။ ဤဓာတ်ပုံများအား မည်သူမျှ ဗွီနိုင်းထုတ်၍ မချိတ်ဆွဲ ရဲကြပါ။ အိုစမာ ဟိုင်ဒါ သည် မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်း ၏ ဆောင်းပါးများကို http://adf.ly/1ZDhA4 တွင် ဖတ်နိုင်သည်။
ယနေ့ လက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၎င်း၏ ငယ်ဘဝ အား လွန်စွာ တမ်းတ သူငယ်ပြန်လျှက်ရှိကြောင်းအား ၎င်း၏ ပြည်ပခရီးစဉ်များမှ သက်သေပြလျှက်ရှိသည်။ သူမနေထိုင်ခဲ့ဖူးသည့် နေရာအားလုံးသို့ သွားခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်က အပေါင်းအသင်းအားလုံး နှင့် တွေ့ခဲ့သည်။ လန်ဒန်၊ အောက်စဖို့၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန် နိုင်ငံရှိ ငယ်ဖော် များအားလုံး နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဥရောပ ခရီးစဉ်တွင် လန်ဒန်၌ ၅ ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး အိုစမာ ဟိုင်ဒါ နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယခုထိလည်း ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိနေသည်။
အပျိုဖျန်းဘဝ က အိုစမာ ဟိုင်ဒါ မှ ဘာကျွေး၍ စည်းရုံးလိုက်သည် မသိ ယခု အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ကုလား ကို ကုလား ဟု မခေါ်နိုင်ကြောင်း ဒေါ်စု တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သမ္မတဖြစ်ရေး စည်းရုံးမှု ကာလတွင်တောင် ကုလားကို ကုလားဟု မခေါ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုလျှက်ရှိရာ ၂၀၁၅ သမ္မတဖြစ်ပြီးနောက် ကုလားများကို ခေါင်းပေါ်တင်ထားလိမ့်မည်။ အစ္စလမ်ဘာသာကို ကျောင်းသင်ခန်းစာတွင် သင်ကြားလိမ့်မည်။ ပါကစ္စတန် နှင့် အန္ဒိယမှ ဆွေမျိုးမကင်း ငယ်ဖော် များအား အပြင် ဗြိတိန်မှ ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားသူ များနှင့် ရိုဟင်ဂျာ မီဒီယ ဘီဘီစီ တို့အား နိုင်ငံတွင်းသို့ သွင်းကာ အခွင့်ထူးပေးလိမ့်မည်။
Posted on April 9, 2016 Categories politicsTags biography, politicsLeaveacomment on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အချစ်ဦး